एनसेल जोगाउन देउवा नांगिए – नेपाली सूर्य
एनसेल जोगाउन देउवा नांगिए
September 10, 2019 September 10, 2019 Nepali SuryaLeaveaComment on एनसेल जोगाउन देउवा नांगिए
काठमाडौं एनसेलको प्रभाव संसद्भित्रै देखिन थालेको छ । संसद्मा एनसेलको कर छलि, सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलामाथि टिप्पणी गर्ने सांसदहरू निशानामा पर्न थालेका छन् । एनसेलमाथि छानबिनको माग गर्ने प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका आफ्ना सदस्यहरूलाई अचानक हेरफेर गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एनसेलप्रतिको बफादारिता देखाउन थालेका छन् ।
एनसेलबाट चुनाव खर्च लिएका देउवाले एनसेललाई जोगाउनकै लागि यो हर्कत गरेको उनकै दलका सांसदले बताउन थालेका छन् । ‘एनसेल जोगाउने खेलस्वरूप नै देउवाले समितिका सदस्यहरू सञ्चय गौतम र देवप्रसाद तिमल्सिनालाई अचानक हेरेफेर गरेका हुन्,’ कांग्रेसका एक सांसदले दृष्टिसँग भने, ‘एनसेलविरुद्ध बोले कारबाही गर्छु भन्ने डर देखाउन देउवाले दुई सांसदलाई समिति परिवर्तन गरिदिएका हुन् ।’
कानुन समितिमा एनसेलको लाभकर सम्बन्धी सर्बोच्च अदालतको फैसला अध्ययन गर्न प्रस्ताव राख्ने सांसदलाई नै सो समितिबाट हटाइएपछि खैलाबैला भएको छ । समितिको अघिल्लो बैठकमा कांग्रेस सांसद गौतमले सर्वोच्चको फैसला अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
गौतमको प्रस्ताव अनुसार नै समितिले सर्वोच्चको भदौ ९ को फैसलाले राज्यलाई अर्बौ राजश्व घाटा भएको भन्दै विज्ञहरूसँगको राय लिएर फैसला अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । गौतमलाई हटाएर सो समितिमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सो समितिमा आफैँ उपस्थित भएका छन् । यस घटनाले एनसेल प्रकरणमा देउवाको संलग्नतालाई पुष्टि गर्छ ।
किन बोल्दैनन् दल र शीर्ष नेता ?
भलै यो प्रकरण सडकबाट संसद्भित्र प्रवेश गरेको छ, तर अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टी वा तिनका शीर्ष नेताले यो प्रकरणमा धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । यति ठूलो प्रकरण र यति धेरै जनताको सरोकार र चासो जोडिएको विषयमा राजनीतिक दलहरू र तिनका शीर्ष नेताको मौनता साँच्चिकै सन्देहात्मक छ । गत निर्वाचनका बेला एनसेलले चुनाब खर्च भनेर अर्बौ रुपैयाँ बाँडेका समाचार आएका थिए । एनसेलसँग पैसा लिनेमा प्रायः सबै दलका शीर्ष नेताको नाम मुछिएको छ । कतै त्यही कारण त होइन, अहिलेको यो मौनता ?
सर्वसाधारण यस्तै प्रश्न गर्न थालेका छन् । सामान्यभन्दा सामान्य विषयमा प्रतिक्रिया जनाइहाल्ने, फेसबुक–ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिहाल्ने नेताहरू यो विषयमा मौन छन् ।
पार्टी कमिटीका बैठकमा समेत यो विषयलाई आधिकारिक छलफलको विषय बनाउन तयार देखिँदैनन् । केही दिनअघि बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा अर्जुननरसिंह केसी र धनराज गुरुङले एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसला गलत आएको भन्दै बैठकमा छलफलको माग गरेका थिए ।
तर, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यसलाई छलफलको विषय बन्न दिएनन् । यो विषयमा बोल्न खोजेका अन्य केही नेता पनि पार्टी नेतृत्वको कोपभाजनमा परिने भयले मौन बसे । यो सबै प्रकरण संसदीय समितिले छानविन गरेमा ठूला नेताहरु पनि पर्न सक्छन् ।
भोका–नांगा जनतालाई अणुबम होइन, रोटी देऊ